Ukubaluleka kobugcisa bePop kuyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Abadlali, Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
El ubugcisa kunye nabazobi Ngaphandle kwamathandabuzo, lelinye lawona mabutho abalulekileyo kuluntu. Kulungile umculo, ukupeyinta, ukwenza, ubugcisa obuhle okanye umdanisoNganye kwezi zinto zinokuba lula njengezintsokothileyo kuxhomekeke kwamehlo azibonayo. Yinto ebalulekileyo eluntwini, ngokungathandabuzekiyo edlulile kuye ngamnye kuthi ngandlela ithile.
Abantu bavame ukukhula uthando olukhulu zobugcisa, ngamanye amaxesha ngaphandle kokuyiqonda, kulungile iba yinxalenye yobomi bakho bemihla ngemihla kwaye ngenxa yoku, ubugcisa abuqwalaselwa. Umzekelo woku inokuba ingumntu omncinci owumamelayo umculo yonke imihla kwaye angakuqondi ukubaluleka kunokubakho ebomini bakhe ngenxa yesiqhelo kunye nesiqhelo ebomini bakhe.
1 Intshukumo yobugcisa Pop Art
2 Iindlela ezahlukeneyo zobuGcisa bePop
Intshukumo yobugcisa Pop Art
Inqaku lanamhlanje lithetha nge intshukumo yobugcisa ebizwa Pop Art, Ukuzalwa ngaphezulu okanye ngaphantsi kwiminyaka ye-50. Iimpawu zalo mbutho ziya kutyhilwa ngokufutshane kunye neminye imiba enomdla ngayo.
Uzalelwe kwinkulungwane yama-XNUMX ekuphenduleni ekubonakalisweni, intshukumo ebalaseleyo ngelo xesha, neyaziwa njenge intshukumo ye-elite ngaphakathi kwesakhelo sobugcisa. Konke oku kuthatha njengesiqalo kwiidolophu zaseNew York naseLondon. Kananjalo, ekupheleni kweminyaka ye-XX, iUnited States nayo yaba lelinye ikhaya loomama loku Iintshukumo zobugcisa, elandelwa yiKhanada kwaye ekugqibeleni neYurophu. Enye into eyaziwayo kukuba le ntshukumo yobugcisa iphumelele kakhulu kwi-60s.
El Ubugcisa be pop ithatha izinto zobomi bemihla ngemihla elizweni, ukubonisa umzekelo ezobugcisa ezaziwayo okanye amanani oluntu kunye nommeli wesizwe. Ukusuka kwezi zinto, uphuhlisa ukukhutshwa okuvumela umbukeli ukuba athabathe umyalezo othile obhekiswe kuwo. Ngezinto ezikhoyo kubomi bemihla ngemihla, umbono ngulo umbukeli unokuchonga ngokulula izintoUkudala unxibelelwano phakathi komsebenzi nomntu owuhlalutyo ekuqaleni.
Ngokunjalo nentshukumo yePop Art, ithiyori, kufuneka ibandakanye ezona zinto zibalulekileyo zelizwe apho ifunyenwe khona, nangona kunjalo, inkcubeko yaseMelika yinto engasebenziyo ngaphakathi koku intshukumo yobugcisa, inikwe ukuba njengoko kuchaziwe apha ngasentla, incopho yayo inokubonwa kwii-60s e-United States.
Ngaphakathi kubume bayo, Ubugcisa bePop buqokelela izinto ezibalulekileyo zongxowankulu, ezamashishini kunye nenkcubeko yabantu, ekhokelela kwintshukumo "ye-hybrid" ngaphakathi kweempawu zayo eziphambili. Isindululo sakhe ngokwemeko yokusebenza sinxulunyaniswa izinto ezibonakalayo zomsebenzi onzima, kunye nolwimi olufuziselayo. Ngokubanzi, phakathi kwezinto zayo badla ngokwenza ukuqaqambisa amanani abantu okanye ezopolitiko, iibhodi zeebhanyabhanya zemiboniso bhanya-bhanya, amaqweqwe amaphephandaba, imifanekiso yesixeko, uphawu oludumileyo okanye enye into ekunokuba lula ukuyibona xa uyijonga kuqala.
Iindlela ezahlukeneyo zobuGcisa bePop
Ke, ngaphakathi kobuchule bayo sinokuthi siqwalasele kwiindidi ezahlukeneyo zemizobo, ekusetyenzisweni kweendlela ezivela kwifayile ye- Dadaism, ikholaji yefoto kunye nejxtaposition. Uluvo lwako konke oku lukhuthazwa lithuba lokuba umsebenzisi avelise isazisi ngokusebenzisa kwabo izifundo kunye nobuchule, Ukuvumela ukuba wenze imisebenzi yakho ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu.
Elinye lawona manani abonakalisa le ntshukumo ngu Andy Warhol, isibonisi esisemthethweni kwimisebenzi yakhe kude kube namhlanje. Imisebenzi yakhe iyabonakala ukuzala kunye nokulayisha okubonakalayo kombala wemifanekiso yakho. Uninzi lwemisebenzi yakhe lubandakanya amanani anje UMarilyn Monroe, uElvis Presley kunye namanye amagcisa ngelo xesha. Imisebenzi yakhe yayijolise kuphela ekuveliseni kwakhona imifanekiso evela kwimibala eyahlukeneyo yemibala, ngokunyuka kakhulu ekulayisheni umfanekiso kwaye ngaloo ndlela kwandisa umthwalo wayo.
Ubugcisa be pop yintshukumo yobugcisa edibanisa yonke imihla ephakanyiselwe amandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukubaluleka kobugcisa bePop kuyilo lwegraphic